Ozil oo xalay dhiibay baas waalli ah oo taageerayaasha Arsenal ay ku kala qaybsameen (daawo) – Gool FM
(London) 22 Feb 2019. Taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa xalay ku kala aragti qaybsamay kubbad uu laacibka reer Jarmal Mesut Ozil uu baasay taasoo ahayd ‘baas mucjiso ah’.
Ciyaartan oo ay xalay Arsenal 3-0 kaga soo adkaatay kooxda Bate Borisov ee Belarusia ayaa waxaa daqiiqaddii 31’ iyadoo Arsenal ay 1 gool lahayd waxa uu Ozil kubbad baas cirib dambe ah soo dhigayaa meel goosha afkeeda ah, balse nasiib darro waxaa kubaddaa khasaarinaya laacibka khadka dhexe ee Gunners Xhaka.
Taageerayaasha Arsenal ayaa qaarkood aaminsan in Ozil kubbaddaasi uu baasay ay ahayd mid ula kac ah oo uu damacsanaa in qof saaxiibkiis ah uu goosha ku laado, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin in ay ahayd kubbad ka hallowday oo uu damacsanaa in uu laado.
Laakiin sida uu weriyuhu sheegayo Ozil oo 30 jir ah ayaa kubbaddaasi lugta la waayay isagoo doonayay inuu lugta bidix ku laado, waxaana Mesut 38 kulan oo ay Arsenal ciyaartay laga reebay 20 ciyaar oo ka mid ah.
Still can’t believe this backheel from Ozil tonight. Would’ve been assist of the decade if it fell to Xhaka’s left peg… pic.twitter.com/5Mkrvygicc
— Shambles FC (@JackTheGooner) February 22, 2019
Taageerayaal badan oo Chelsea ah oo ku Farxay Ganaaxa la dul dhigay kooxdooda....(SABAB?)